31 ရက် 8 လ က ဘလော့ဂ်ဒေးဆိုပြီး FB ရပ်ဝန်းမှာ အပေါင်းအသင်းတစ်စုရဲ့ post လေးတွေ ဟိုနားဒီနား ပြန်ဖတ်ရတော့ ရင်တွေတောင် ခုန်လာသလို စိတ်ထဲမှာလဲ မရောက်ဖြစ်တာ ကြာနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဂ် ရပ်ဝန်းလေးပေါ် FB notes လေးတွေကတဆင့် ခြေချခွင့်ရတော့ ရင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ပိုးလေးက ခေါင်းပြန်ပြူလာတယ် … စိတ်ထဲမှာလဲ စာတွေပဲ ပြန်ရေးချင်သလိုလို ဖြစ်လာတယ် … ဖြစ်တာက ခုမှ မဟုတ်ပါဘူး … ကြားထဲမှာလဲ ခဏ ခဏ ရးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ ပေါ်လာလေ့ရှိပေမဲ့ ကြိုဆိုသူမဲ့ အိမ်လေးပေါ်ကို တက်ရမှာ ရွန့်တွန့်တွန့် ဖြစ်နေခဲ့မိတယ် … ခုတလော သူများတွေရဲ့ စာလေးတွေ ပြန်ဖတ်ရတဲ့အချိန်မှ အသိတစ်ခု ပြန်ဝင်လာပြန်တယ် … ဟိုးတစ်ချိန် ဘလော့ဂ် စမရေးခင် အလုပ်အားတဲ့ အချိန်တိုင်း online ပေါ်မှာ သတင်း ၊ ရုပ်ရှင် ၊ သီချင်းက စလို့ ဖတ်ချင်တဲ့ စာတွေ ၊ သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ မှန်သမျှတက်ရှာရင်းနဲ့ ဘလော့ဂ်ဆိုတာကို စပြီး သတိထားမိ လာတယ် … အဲဒီအချိန်မှာကတည်းက တချို့ နံမည်ရနေတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါကြီးတွေ နံမည်ရနေတဲ့ နည်းပညာဆိုဒ်တွေလဲ အများကြီးတွေ့လာရတယ် … online ပေါ်မှာပဲ လျှောက်လည်ရင်း စာလိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင်လဲ ဘလော့ဂ်လေး စလုပ်ဖြစ်တယ် … လုပ်ဖြစ်တာတောင် ကိုယ့်ဘာသာ diary ရေးသလိုပဲ ရေးနေမိတာ … ချပြရလောက်တဲ့ စာတွေလဲ မဟုတ်လေတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ ချမပြဖြစ်ခဲ့ဘူး … ဒီလိုပဲ internet ဆိုတာကို 24hrs သုံးဖို့ အဆင်ပြေတဲ့ ဆီမှာ ရောက်နေတဲ့ နေရာမှာ ရှိနေလို့ အလုပ်ပင်ပန်းတဲ့အခါ၊ စိတ်ညစ်တဲ့အခါ စိတ်ပျော်တဲ့အခါ၊ ပျင်းတဲ့အခါ၊ အထီးကျန် ခံစားရတဲ့အခါ၊ ထွက်ပေါက်ပေးချင်တဲ့ အခါတွေမှာ ရေးခဲ့မိတယ် … အဲဒီမှာ မရေးခင် ning site လေး တစ်ခုမှာလဲ ရေးဖူးလေရဲ့ … နောက်တော့ စာတွေလည်ဖတ်ရင်း ကောမန့်လေးတွေ ဖတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ only me မဟုတ်တော့ပဲ public ပေါ်ရောက်လာခဲ့တယ် … အဲလိုနဲ့ 2009 August ထဲမှာပဲ ဘလော့ဂ်ပေါ် ခပ်တည်တည် တက်လာဖြစ်ခဲ့တယ် … စရေးတာတွေ ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင် ကိုယ့်ဘာသာ ရယ်မိတဲ့အခါလဲရှိ ၊ ရှက်မိတဲ့အခါလဲ ရှိပေါ့ … ဘယ်သူဖတ်ဖို့ ရေးတာမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ ပေါက်ကွဲသံစဉ်တွေ ရေးနေ ခိုက်မှာပဲ ရေးဖေါ်ရေးဖက် သူငယ်ချင်း၊ အပေါင်း အသင်းတွေ ရောက်လာပြီး ကောမန့်တွေ ပေးသွား စီဘောက်စ် ထဲအော်သွားနဲ့ ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ တရုန်းရုန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကာလလေးက ပျော်စရာကောင်းခဲ့သလို လွမ်းစရာလဲ ကောင်းခဲ့တာ အမှန်ပါ … အဲဒီကာလတွေ ဆီမှာတော့ အလုပ်ထဲ လဲသူ့စိတ် ၊ အပြင်သွားလဲသူ့စိတ် ၊ စားလဲသူ့စိတ် ၊ အိပ်လဲသူ့စိတ် ၊ ဖြစ်တဲ့ထိအောင် လွှမ်းမိုးခံရဖူးတယ် … တစ်ခါ တစ်လေ အိပ်ယာပေါ် ရောက်တာတောင် အတွေးထဲ သူရောက်လာရင် အိပ်ယာထ မေ့သွားမှာစိုးလို့ ထ ရေးတဲ့အထိ စွဲလန်းခဲ့ဖူးတယ် … နည်းပညာဆိုဒ်တွေ သွားပြီး ကိုယ့်အိမ်လေးကို အမျိုးမျိုး အလှဆင်၊ ခြယ်ကာသ ရတာလဲ အမော … သူ့အပေါ် ပေးခဲ့ရတဲ့ အချိန် နဲ့ ကိုယ် ၊ စိတ် ၊ နှလုံး သုံးပါးလုံးကိုလဲ ရွှင်ပြုံးကျေနပ်ခဲ့ဖူးတယ် … ဘယ်သူ့အတွက် မှ မဟုတ်သလို ဘာအကျိုးအမြတ် အတွက်မှ မဟုတ်ပဲ ပျော်ခဲ့မိတဲ့ နေရာလေးကို အကြောင်း အမျိုးမျိုး နဲ့ မြန် မြာ ပည် ပြန်ရောက်သွားတာက တစ်ကြောင်း ၊ အိမ်ထောင့် တာဝန်တွေ ပိသွားတာက တစ်ကြောင်းနဲ့ နှုတ်မဆက်ပဲ ခွဲခွာခဲ့ ရတယ် … ကျွန်မခွဲခွာပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ တစ်ချို့သူတွေလဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ နှုတ်မဆက်ပဲ ထွက်ခွာ ၊ တစ်ချို့တွေလဲ သိသိသာသာ နှုတ်ဆက် ၊ တစ်ချို့တွေလဲ နေမြဲအတိုင်း ကျန်ရစ်နဲ့ ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ သိသိသာသာ ခြောက်ကပ် တိတ်ဆိတ်သွားပြီး ဖဘပေါ် မှာပဲ အပေါင်းအသင်းတစ်ချို့ကို တွေ့နေရတယ် … ကိုယ့်အိမ်လေး လွမ်းလို့ သွားကြည့်ရင်း ရောက်ရင်လဲ သရဲခြောက်မတတ် တိတ်ဆိတ်နေလေရဲ့ … အဲလိုနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ရေးဖို့ အကြောင်းအရာလေးတွေ စဉ်းစားမိပေမဲ့ အိမ်ကလေးပေါ် မရောက်ဖြစ်တဲ့ထိ ခြေလှမ်းတွေ တုန့်နေခဲ့တယ် … ဘလော့ဂ်စရေးကတည်းက ဘယ်သူဖတ်ဖို့ ဆိုပြီး ရေးခဲ့တာ မှ မဟုတ်ခဲ့ပဲ ကိုယ့်ဘာသာ ရေးချင်လို့ ရေးချင်ရာတွေ ရေးနေခဲ့ပြီး ဒီအတိုင်းပစ်ထားခဲ့မိတာ ကိုယ်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်လေး ကိုယ့်ဘာသာ ဖြိုချမိသလို အတွေး ၀င်လာပြန်တယ် … ( ဘလော့ဂ်ဒေးရဲ့ လှိုင်းခတ်မှုနဲ့ပေါ့ … ) ♫♪♪ ♫♪ ဒီကစပြီး …. ♫♪ ရှေ့ကိုလေ …… ♫♪♪ ♫♪ ဆက်မဆိုတော့ပါဘူး … မသေချာသေးလို့ :) … ဖဘမှာ 2009 ကတည်းက အကောင့်ဖွင့်ထားပေမဲ့ မရောက်ဖြစ်ဘူး … ဒီလိုပဲ သတင်းလေး တက်ဖတ်လိုက် သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေ ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာ တက်ကြည့်လိုက်ကလွဲလို့ ချစ်ခင်ပျော်ဝင်ပြီး မသုံးဖြစ်ဘူး … ကျွန်မရဲ့ အချစ်ဦးလောက် မချစ်တာတော့ အသေအချာပဲ :) … ဘာလို့ဆို ကျွန်မရဲ့ FB Friends ထဲမှာ ဆိုရင် စာရေးဆရာ ၊ ကဗျာဆရာ ၊ ပန်းချီဆရာ ၊ ဓါတ်ပုံဆရာ၊ ဘလော့ဂ်ဂါနဲ့ ကျွန်မရဲ့ အမျိုးအရင်းတွေပဲ ရှိနေခဲ့တယ် … ကျွန်မကို သိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မသိတဲ့သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မက add သည်ဖြစ်စေ ၊ ကျွန်မကို add သည် ဖြစ်စေ ကျွန်မရဲ့ friend list ထဲမှာ ကျွန်မချစ်တဲ့ အနုပညာသမားတွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို အလွယ်တကူ တွေ့နေရတဲ့ အတွက် ကျွန်မ ဂုဏ်ယူမိတယ် … ကျွန်မ friend list ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါတွေ အားလုံးက ကျွန်မကို မသိပေမဲ့ ကျွန်မသိတဲ့ ကျွန်မလေးစားတဲ့ ကျွန်မမြတ်နိုးတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါ အားလုံးဟာ ကျွန်မရဲ့ အချစ်ဦးတွေပါပဲ … ခုထိလဲ ချစ်နေဆဲပါပဲ ... <3
စာရေးသူ လင်းကြယ်စင် at Tuesday, September 03, 20136comments
သမီးရင်ထဲမှာ ရှိတာတွေ မေမေသိနိုင်မလား ......
စာရေးသူ လင်းကြယ်စင် at Saturday, January 26, 20130comments
Labels: ကျွန်မရဲ့ မေမေ
ေ၀၀ါးဝါး တွေးမိပြန်တယ် .....
အတွေးတွေ ရပ်တန့်သွားစေတယ် .....
ရူးမိုက်မှားလို့ ပြန်ပြုံးပြမိတယ် .....
မနက်ဖြန် လင်းအားကြီးဖို့ .....
ဒီနေ့ကုန်အောင် ကျဲချခဲ့တာ .....
စာရေးသူ လင်းကြယ်စင် at Wednesday, October 03, 20122comments
တော်တော်ကြာပြီ ပစ်ထားခဲ့တာ ... အချစ်ဟောင်းလေးကို ... ပြန်တွေ့တော့လဲ ရင်တွေများတောင် ခုန်ရဲ့ ... အဲလောက် ညှို့ယူဖမ်းစားနိုင်ပါလား ... ဒီကနောက်ဆို မပစ်ထားတော့ပဲ မကြာ မကြာ လာကြည့်မယ် ...
စာရေးသူ လင်းကြယ်စင် at Tuesday, September 04, 20125comments
Labels: For My Blog
HAPPY BIRTHDAY ' K ' ! (သို့)5ကျပ်တန် Birthday Wish
ကျွန်မအိမ်ကလေးပေါ်လာပြီး ရင်မဖွင့်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားပြီ … ဘာရယ်ညာရယ် မဟုတ်ပါဘူး … ခရီးထွက်နေရတာရယ် … မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ တာဝန် ၊ ၀တ္တရားတွေကြားမှာရယ် နစ်မြုပ်နေတာနဲ့ စိတ်ပဲ ရောက်ပြီး လူက မရောက်ဖြစ် …
ဟိုးတစ်လောက ခရီးထွက်သွားတာ မြန်မာပြည်ထဲက မြို့တစ်မြို့ကို ရောက်နေတယ် … အဲဒီရက် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်မ သူငယ်ချင်း “ K ” ရဲ့ မွေးနေ့ကို ရောက်လာတော့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေး ပို့ချင်တာ … ဒါပေမဲ့ အဲဒီမှာ အင်တာနက်သုံးဖို့ကလဲ အဆင်မပြေ ...
ဒီတော့ ဖုန်းနဲ့ လှမ်းပြောမှ ဖြစ်တော့မယ် … သူက စလုံးမှာ ဆိုတော့ international call သုံးပြီး ခေါ်ရတော့မယ် … တစ်ခါမှလဲ ပြည်တွင်းကနေ မခေါ်ဖူးတာမို့ ရ ၊ မရလဲ မသိ ၊ ရရင်ရော ဘယ်နှုန်းနဲ့ ဘယ်လို ရှင်းရမှန်း မသိနဲ့ ၊ ဒါပေမဲ့ ရအောင် ခေါ်ပြီး ဆုတောင်းကို လှမ်းပြောချင်မိတယ် … အဲဒါနဲ့ မြန်မာဂျီ နဲ့ ခေါ်လိုက်တာ တန်းကနဲ ၀င်သွားပါတယ် … ဟာ … တယ်ဟုတ်ပါလားပေါ့ … လွယ်သားပဲ … မြန်မာပြည်ထဲမှာ ဆက်သွယ်ရေး ခက်လှ ခက်လှ နဲ့ ဘယ်မှာ ခက်လို့လဲပေါ့ စိတ်ထဲကနေ ကြိတ်ပြီး ချီးကျူးနေမိတယ် …
၀င်သွားတော့ “ HAPPY BIRTHDAY ! ’’ ဆိုတာနဲ့ သူလဲ အံ့သြောတကြီးနဲ့ “ Oh ! Thank You ” လို့ ပြန်ပြောပြီး “ ဟေး … နင်ဘယ်ရောက်နေလို့လဲ … ဘယ်ကဆက်နေတာလဲ ” ဆိုတော့ ကျွန်မကလဲ ကျွန်မခရီးထွက်လာတာ အဲဒီမြို့ကလေးကို ရောက်နေကြောင်း ပြန်ပြောပြလိုက်တယ် ဆိုရင်ပဲ … ကျေးဇူးရှင်က သိတတ်စွာနဲ့ “ ဟာ… ဒါဆို ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ကုန်လိမ့်မယ် … ဖုန်းချလိုက်တော့ … နင် နေကောင်းတယ်မို့လား …” “ အင်း … နေကောင်းပါတယ် …” ဆိုပြီး ဖုန်းချလိုက်တာ …
2မိနစ်နဲ့ 38 စက္ကန့်ဆိုတော့3မိနစ်ပေါ့ … အင်း ဘယ်လောက်ကျမယ်မသိပေါ့ … ဖုန်း Bill လဲ ထွက်လာရော အဲဒီ 3မိနစ်ကို FEC5ကျပ်ကြီးများတောင် ကျတယ် … ငွေလဲတာ မြန်မာငွေနဲ့ 5500 နီးပါးလောက် ကျသွားတယ် … ကျွန်မ သူ့ဆီကို ထိုင်းဖုန်းနဲ့ ဆက်နေတာ တစ်မိနစ်ကို တစ်ဘတ်တောင်မကျဘူး … 85ပြားပဲ … မြန်မာငွေနဲ့ ကျပ်30 လောက်ပဲ ကျတယ် ...တစ်ခြား ဘယ်နိုင်ငံပဲ ခေါ်ခေါ်လဲ အဲလောက်ပါပဲ … အိုး … ခုတော့ တစ်မိနစ် ကျပ် 1800 မကဘူး … အင်း … ဒါကြောင့်5ကျပ်တန် Birthday Wish လို့ ပြောတာပါ … အဲလောက်တောင် ဈေးကြီးရတယ်လို့ပဲ …
ကဲ … သူငယ်ချင်း “ K ”
နင့် မွေးနေ့ကို ရောက်လာတာ မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်မ အိမ်ကလေး ဆောက်ထားတာ တစ်နှစ်ပြည့်တာနဲ့ အတူတူပဲနော … ဘာလို့လဲဆိုတော့ မနှစ်က သူ့မွေးနေ့မှာပဲ သူ့ကို မွေးနေ့ဆုတောင်းပို့ရင်း ကျွန်မ ဘလော့ဂ်လင့်ကလေးကို လှမ်းပို့ဖြစ်တယ် …
ကျွန်မရဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းလေး ကျွန်မဘလော့ဂ်လေးနဲ့ အတူ အသက်တစ်နှစ်ကြီးလာပြီး ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ တိုးတက်ကြီးပွားနေကြောင်း ကြားရလို့ အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာမိပါတယ် …
5 ကျပ်ပေးရတာ မကျေနပ်လို့ Back Date နဲ့ HAPPY BIRTHDAY ! လုပ်လိုက်ပါတယ် " K " ...
စာရေးသူ လင်းကြယ်စင် at Monday, November 08, 20103comments
ကိုယ့်စိတ်တွေ ပြင်းပြ အကျဉ်းကျနေတာနဲ့
ရောင်စုံတွေ ရှေ့ချ ဖွဖွလေး ရေးခြစ်မိတယ် ...
စိတ်ရဲ့နောက် ကိုယ်က လိုက်နေတာလား ...
ကိုယ့်ရဲ့နောက် စိတ်က လိုက်နေတာလား ...
ကိုယ်တကယ် မသိဘူး ...
သိတာတော့ ရောင်စုံခဲတံဗူး ကိုယ့်ရှေ့ရောက်နေခဲ့တာပဲ ...
ဒါလဲ ကိုယ်တကယ်မသိဘူး ...
သိလိုက်တဲ့ခဏတော့ ရောင်စုံခဲတံတွေ လက်ကလွှတ်ချ မရတော့တာပဲ ...
ဟင် ... ဘယ်သူပြောခဲ့တာလဲ ...
ဒီအရောင်နဲ့ ဒီအရောင်တွဲမှ မက်ရှ် (match) ဖြစ်တယ်လား ...
ဟာမိုနီ မလှတာလား ၊
သီအိုရီ မကျတာလား ၊
ဒဿနတွေလား ၊ ဂိုဏ်းဂဏတွေလား ၊
ညှိမရတဲ့ ပဋိပက္ခတွေလား ...
ဒါတွေလဲ ကိုယ်တကယ်မသိဘူး ...
ပေါ့ပ်အတ် (pop art) ဆွဲသလောက် ရောင်သွေးမကြွပေမဲ့
အ၀ါ နဲ့ အစိမ်းစပ်လို့ ပြာလွလွ ထွက်လာရင်ပဲ သဘာဝကျလှနေပြီ ...
ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး ... ပြန်ပြောခွင့် မသာတဲ့ ကျေးဇူးရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ခဏ မွန်းကျပ်သွားလို့ တိတ်တဆိတ်လေးပဲ ကိုယ့်ဘာသာ အရောင်တွေ စပ်ကြည့်နေတယ် ... ကိုယ့်ဘာသာ ဆိုပေမဲ့ Google အကူအညီနဲ့ပါ ... Google နဲ့ လျှောက်သွားနေလိုက်တာ ... ဟိုရောက်လိုက် ၊ ဒီရောက်လိုက် ၊ တစ်နေရာ ရောက်တော့ စိတ်ပြေ လက်ပျောက် ဖြစ်သွားတယ် ... စိတ်ပြေတယ် ဆိုတာ တကယ်ပါ ... အဲဒီနေရာမှာ စိတ်တွေ အကုန်ပြေသွားလို့ ... လက်ပျောက် ဆိုတာလဲ တကယ်ပါပဲ ... လက်နဲ့ လိုက်ဆွဲစရာ မလိုပဲ သူဆွဲထားတဲ့ ကာတွန်း ပန်းချီလေးတွေထဲ ကိုယ့်ကြိုက်တဲ့ အရောင်တွေ ရွေးပြီး ကလစ်လိုက်တာနဲ့ ထည့်ပြီးသား ဖြစ်သွားရော ... ကဲ ... အဲဒီတော့ လက်က ပျောက်တော့တာပေါ့ ... :P
တစ်ပုံနဲ့ အားမရလို့ နောက်တစ်ပုံ ထပ်လုပ် ကြည့်ထားတာ ... ကိုယ့်စိတ်ကူး နဲ့ကိုယ် ရေးထားတာမို့ ဖတ်လို့ အဆင်ပြေ ချင်မှ ပြေမယ် ... ဟိုကြော်ငြာ ထဲကလိုပဲ ကိုယ့် အတွေး နဲ့ ကိုယ် ကယ်လ်စီယမ် ကွေကာ သောက်ကြသည် ဆိုလားပဲ ... ခုလဲ ကိုယ့် အတွေး နဲ့ ကိုယ် ကယ်လ်စီယမ် ကွေကာ သောက်သွားကြပါ ... :P
အဲဒါ အပြာရောင် မရပါဘူး ဇွတ်ငြင်းတဲ့သူက ရှိသေး ... မယုံရင် အစိမ်းရောင် ထဲကို အ၀ါရောင်တွေ မှောက်ချကြည့် ... စိမ်းပြာလိုလို အပြာရောင် တစ်မျိုး ထွက်လာလိမ့်မယ် ... :P
ပျင်းရင် အရောင်တွေ သွားထည့် ကြည့်ပါ ... ပုံတွေ အများကြီးပဲ ... ဆွဲပြီး Link တော့ မထုတ်ပေး လာဘူး ... Code တွေပဲ ထုတ် ပေးတယ် ... ကိုယ့်ဘာသာ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားတယ် ... Pop Art ပြောင်းလိုက်တော့ ထွက်လာတဲ့ အရောင်တွေ... :)
အဲလောက် အရောင် အသွေးစုံစုံနဲ့ မလှရင် တောင်မှ အပြာရောင်လေး တစ်မျိုးလောက် ရရင် ကျေနပ်ပြီ ... အပြာရောင်က " ငြိမ်းချမ်းခြင်း " ရဲ့ သင်္ကေတ မဟုတ်လား ...
စာရေးသူ လင်းကြယ်စင် at Tuesday, July 13, 20107comments
အထပ်ထပ် အခါခါ ရေးတဲ့ စာမျက်နှာတွေလဲ
ဒဏ်ရာတွေ ဗလပွနဲ့ပေါ့ ...
ဆန္ဒရှိသမျှလဲ ဆန္ဒမှာပဲ ပျောက်ကွယ်
ဘယ်ဆီ ဘယ်ဝယ်ပေါ့ ...
" ကျွန်မရဲ့လမင်း "
ခဏချင်းပဲ ကျွန်မဘ၀ လင်းလက်လှပစေပြန်တယ် ...
သံသယကင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ ရောပြွန်းလို့
ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးကိုလဲ လှပစေမယ် ...
ခမ်းနားစရာ မလိုပါဘူး ...
လမ်းဖြူးဖြူးလို့ မှတ်ယူပြီး လျှောက်လိုက်စမ်းမယ် ...
ကဲ ... ဒါဆို ... ကျွန်မရဲ့လမင်း
ချစ်သူ့ အပြုံး ၊ ချစ်သူ့စကားလုံးတွေကြားမှာ
ကဗျာတွေ ဖွဲ့ခွင့်ရပါရစေ ...
ကျွန်မရဲ့ ကိုယ်ပွား ညီမလေး အတွက် ... :P
စာရေးသူ လင်းကြယ်စင် at Wednesday, July 07, 2010 11 comments